စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကနေ ဘာသင်ခန်းစာတွေ ယူနိုင်သလဲ - ข่าวสด
စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကနေ ဘာသင်ခန်းစာတွေ ယူနိုင...
13 ก.ย. 2564 - 23:00 น.
၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်အပြီး လပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဒီလိုပြုလုပ်သူ အယ်လ်ကိုင်းဒါးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေ ခိုအောင်းနေတယ်လို့ ယူဆမှုနဲ့အတူ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကို အမေရိကန်နဲ့တကွ နိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့တွေက တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြ
စက်တင်ဘာ ၁၁ (၉/၁၁) တိုက်ခိုက်မှုလို့ အမည်တွင်တဲ့ ၂၀ဝ၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေး စင်တာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရာကစလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ အတွင်း ကမ္ဘာကြီးက ဘာသင်ခန်းစာတွေ ယူနိုင်သလဲ ဆိုတာဟာ လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်သင့်တဲ့ ကိစ္စတခု ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်အပြီး လပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဒီလိုပြုလုပ်သူ အယ်လ်ကိုင်းဒါးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေ ခိုအောင်းနေတယ်လို့ ယူဆမှုနဲ့အတူ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကို အမေရိကန်နဲ့တကွ နိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့တွေက တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး တာလီဘန်အစိုးရကို ဖြုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ အနှစ် ၂၀ ကြာလာတဲ့အချိန်မှာ အခုလို အယ်လ်ကိုင်းဒါးအဖွဲ့တွေကို ခိုအောင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ တာလီဘန်တွေပဲ အာဖဂန်အစိုးရ ပြန်ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ အနှစ် ၂၀ ကာလအတွင်းမှာ အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ “အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေး စစ်ပွဲ” ဆင်နွှဲမှုနဲ့အတူ အာဖဂန်အပြီးမှာ အီရတ်ကို အနောက်နိုင်ငံတွေက တိုက်ခိုက်မှုလည်း ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို အကြမ်းဖက်ဝါဒ တိုက်ဖျက်ရေး ခေါင်းစဉ်နဲ့ တိုက်ခိုက်ကြပြီးနောက်ပိုင်းကာလမှာတောင် အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ ခေါင်းထောင် ပေါ်ပေါက်လာပြီး အင်အားကောင်းခဲ့တာ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတလျှောက်မှာလည်း အီရန်ကျောထောက်နောက်ခံရှိတဲ့ စစ်သွေးကြွတွေ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိလာကြတာကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်ဝါဒ ကိုင်စွဲသူတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်းများစွာ အသက်ပေးခဲ့ရတာကိုလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ ပမာဏထက် ပိုမိုများပြားတဲ့ သာမန်အရပ်သားတွေလည်း သေကြေခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း အကြမ်းဖက်ဝါဒ ကတော့ လုံးဝ မပျောက်သွားသေးဘဲ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေက လတ်တလောနှစ်တွေအထိ ဆက်ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ အပိုင်းတွေလည်း ရှိနေပြီး ဥရောပဘက်မှာ ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုလောက်အထိ ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုမျိုးတော့ ထပ်မဖြစ်ခဲ့တာအပြင် အယ်လ်ကိုင်းဒါးရဲ့ အာဖဂန်အခြေစိုက်စခန်း အတော်များများ ဖျက်စီးနိုင်ပြီး ပါကစ္စတန်အတွင်းက သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့တာ၊ အီရတ်နဲ့ ဆီးရီးယားမှာ နယ်မြေ အင်အားကြီးလိုက်တဲ့ အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ကို ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ရှိနေသေးတဲ့ အကြမ်းဖက်ဝါဒ အန္တရာယ်ကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ အတွင်း အခြေအနေတွေကို ကြည့်ပြီး ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့ အောက်ပါ သင်ခန်းစာတွေကို ယူနိုင်ပါတယ်။
တာလီဘန်တွေ သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း အာဖဂန်က ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ ဘဝအခြေအနေ
အာဖဂန်နစ္စတန်- တာလီဘန်လက်ရောက်သွားတဲ့ စစ်လက်နက်များ
၁။ အရေးပါတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေ ဖလှယ်ရေး
၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှု မဖြစ်ခင် လပိုင်းကာလမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အဓိက ထောက်လှမ်းရေးဌာန နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးဌာန စီအိုင်အေနဲ့ ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဗျူရို အက်ဖ်ဘီအိုင် နှစ်ခုစလုံးက အခုလို တိုက်ခိုက်မှုကြီး တစ်ခု လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို သတင်းအစအန ရထားကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုလို တစ်နိုင်ငံထဲက ထောက်လှမ်းရေးဌာနနှစ်ခုအကြား ပြိုင်ဘက်သဘောထားပြီး အချက်အလက် မဖလှယ်တာနဲ့ အခြား နိုင်ငံတကာ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့တွေကိုလည်း မဖလှယ်တဲ့ အခြေအနေကြောင့် ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြီးကို မတားဆီးနိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ၉/၁၁ ကော်မရှင်ရဲ့ အစီအရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်အပြီးမှာတော့ မှားခဲ့တဲ့ အမှားတွေကို ထောင့်စေအောင် ရှာဖွေ ပြင်ဆင်ပြီး အဓိက ကျတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံတော် အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး ဌာန NCTC မှာဆိုရင် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရဌာနပေါင်း ၁၇ ခုက နေ့စဉ်ရရှိတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေကို နေ့စဉ်ဖလှယ်တဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ရှိနေပါတယ်။
ယူကေနိုင်ငံမှာ ဆိုရင်တော့ အကြမ်းဖက်ဝါဒ ဆိုင်ရာ ပူးတွဲ လေ့လာသုံးသပ်ရေး စင်တာ JTAC ဖွဲ့စည်းထားပြီး အဲဒီ အဖွဲ့မှာ ပြည်တွင်းထောက်လှမ်းရေး အမ်အိုင်ဖိုက်၊ ပြည်ပထောက်လှမ်းရေး အမ်အိုင်စစ်၊ ကာကွယ်ရေးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ အခြားသက်ဆိုင်ရာ ဌာနပေါင်းစုံတို့က ကျွမ်းကျင်သူတွေဟာ လန်ဒန်မှာ အမြဲတမ်း ရုံးထိုင်ပြီး ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပမှာရှိတဲ့ ယူကေနိုင်ငံသားတွေ ကြုံရနိုင်တဲ့ အကြမ်းဖက်အန္တရာယ် အလားအလာတွေကို တောက်လျှောက် သုံးသပ်လေ့လာနေကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို ထောက်လှမ်းရေး သတင်းဖလှယ်ကြရုံနဲ့ ပြီးပြည့်စုံပြီလို့တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ JTAC ဖွဲ့အပြီး ၂ နှစ်အကြာ ၂၀ဝ၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့မှာ ၇/၇ တိုက်ခိုက်မှုလို့ အမည်တွင်တဲ့ အကြမ်းဖက် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေ ယူကေနိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ တိုက်ခိုက်မှုကို အယ်လ်ကိုင်းဒါးက ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူ ၅၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
နောက်တနှစ်အကြာ ၂၀၁၆ မှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဘက်က သတင်းပေးမှုကြောင့် ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တွေ အကြီးအကျယ် ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တဲ့ အကြမ်းဖက်ကြံစည်မှုကို JTAC က တားဆီးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၇ ကာလအထိ မန်ချက်စတာမြို့ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု အပါအဝင် ယူကေနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှု အများအပြား ရှိနေဆဲ ဖြစ်တာကို တွေ့ရမှာပါ။
အခုလို ထောက်လှမ်းရေးသတင်း ဖလှယ်ရာမှာ ဦးစားပေး စဉ်းစားချက် မှားယွင်းမှုကြောင့်လည်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ မတားဆီးနိုင်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပြီး လူ ၁၃၀ သေဆုံးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ပါရီမြို့ ဘာတာကလန် ပြဇတ်ရုံ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုဆိုရင် ဥရောပအာဏာပိုင်အသီးသီးက အရေးကြီး ထောက်လှမ်းရေး သတင်းတွေကို အချင်းချင်း အချိန်မီ မဖလှယ်နိုင်ခဲ့တာကလည်း ဒီလို ဖြစ်သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုလို့ သုံးသပ်ချက်တွေ ရှိထားပါတယ်။
၂၀၁၇ ကာလအထိ မန်ချက်စတာမြို့ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု အပါအဝင် ယူကေနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှု အများအပြား ရှိနေဆဲ ဖြစ်
၂။ ပြတ်သားရှင်းလင်းသော စစ်ဆင်ရေး ရည်ရွယ်ချက် ရှိရေး
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ တာလီဘန်လက်အောက် ပြန်ရောက်သွားဖို့ ဖြစ်လာစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ အာဖဂန်ကို တိုက်ခိုက်အပြီး နောက်နှစ်နှစ်အကြာ ၂၀ဝ၃ ခုနှစ်မှာပဲ အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံတကာ တပ်ဖွဲ့တွေက အီရတ်နိုင်ငံကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုက အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အခုလို တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် အီရတ်အခြေအနေက အာဖဂန်မှာ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို အလေးပေး မရှင်းလင်းနိုင်စေတော့တဲ့ လမ်းလွဲစေမှု ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ သုံးသပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဖဂန်ဒေသခံတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့အတူ အယ်လ်ကိုင်းဒါးအဖွဲ့ဝင်တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် ရှာဖွေနှိမ်နင်းနိုင်ပြီး တာလီဘန်တွေကိုလည်း နောက်ကျချထားနိုင်တဲ့အထိ အောင်မြင်မှုရနေတဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ယူကေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အီရတ်ကို ရွှေ့ပြောင်းစေလွှတ် ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် တာလီဘန်နဲ့တကွ ဆက်စပ်တဲ့ စစ်သွေးကြွ အုပ်စုတွေ ပြန်လည် အင်အားစုစည်းဖို့ အချိန်ရသွားစေခဲ့ပါတယ်။
အာဖဂန်ကို အနောက်နိုင်ငံတွေ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ စစ်ဆင်ရေးရဲ့ အကြောင်းရင်းက တာလီဘန်တွေက ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွန်သူ အယ်လ်ကိုင်းဒါး အဖွဲ့ဝင်တွေကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ ငြင်းဆန်တယ်ဆိုပြီး အမေရိကန်နဲ့တကွ နိုင်ငံတကာ တပ်ဖွဲ့တွေက တာလီဘန်တွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဒေသတွင်း မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တာလီဘန်နဲ့ အယ်လ်ကိုင်းဒါးတို့ကို တိုက်ခိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမှန်တကယ်မှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း နောက်ပိုင်းမှာ ပေါ်လာတဲ့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သေဆုံးနိုင်တဲ့ လက်နက်တွေရှိတယ်ဆိုပြီး အီရတ်ကိုပါ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုက မူလ အကြမ်းဖက်သမား စစ်ဆင်ရေး ရည်ရွယ်ချက်ကနေ အားပျော့ သွေဖည်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
၃။ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးမှာ မဟာမိတ် အရွေးမမှားရေး
ယူကေနိုင်ငံက အမေရိကန်ရဲ့ အနီးစပ်ဆုံး မဟာမိတ်အနေနဲ့ အီရတ်နိုင်ငံကို အတူအကွ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာ နောက်ပိုင်း အရေးပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာလည်း ယူကေက အလိုတူ အလိုပါအဖြစ် ပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်ဒမ်ဟူစိန်ရဲ့ အီရတ်အစိုးရကို တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူပြီးမှာ အီရတ်စစ်တပ်ကို ချက်ချင်း ဖျက်သိမ်းတာနဲ့ ယခင်အာဏာရ ဘာ့သ်ပါတီဝင်ဟောင်းတွေ အားလုံးကို အစိုးရရာထူးတွေက ထုတ်ပစ်တာတွေ မလုပ်ဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေရှိတဲ့ကြားက အမေရိကန်က ဒီလို လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ချက်ချင်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ အီရတ်စစ်သားတွေ၊ အီရတ် ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အစွန်းရောက် ဂျီဟက်ဒ်ဝါဒီတွေနဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်သွားကြပြီး နောက်ဆုံး အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ အိုင်အက်စ် ဆိုပြီးတော့ပါ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း အနောက်နိုင်ငံ ထောက်လှမ်းရေးတွေ ပြာယာခတ်သွားမှုနဲ့အတူ လူ့အခွင့်အရေး လိုက်နာမှု မှတ်တမ်းမကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မိသွားတာတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန်နဲ့ ယူကေတို့ ပါဝင်တဲ့ မြောက်အတ္တလန္တိတ် စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ နေတိုးကပဲ လစ်ဗျားအစိုးရကို ဖြုတ်ချခဲ့အပြီးမှာ စာနယ်ဇင်းသမားတွေဟာ ယူကေနိုင်ငံက နိုင်ငံတကာထောက်လှမ်းရေးဌာန အမ်အိုင်စစ်က ဝါရင့်အရာရှိတဦးနဲ့ လစ်ဗျားက အလားတူ ဝါရင့်အရာရှိ တဦးတို့ရဲ့ အစ္စလာမ္မစ်ဝါဒီ ပြည်ပြေးတစ်ဦးကို ခေါ်ဆောင် ဖမ်းဆီးရေး ကိစ္စအတွက် တိုင်ပင်ထားကြတဲ့ စာတစောင်ကို တွေ့ရှိခဲ့မှု ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကြောရေး စခန်းတွေမှာ အကြမ်းဖက်သမားလို့ ယူဆခံထားရရုံ သက်သက်နဲ့ ထိန်းသိမ်းခံရပြီး လူလောကက ပျောက်ကွယ်သွားသူတွေလည်း ရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်း အနောက်နိုင်ငံတွေ ပိုပြီး သိက္ခာကျခဲ့ရ
၄။ ကိုယ်တိုင် လူ့အခွင့်အရေး မလိုက်နာတဲ့အတွက် သူတပါးအား အလားတူ ဝေဖန်ခြင်း အားပျော့မှု
အထူးသဖြင့် အမေရိကန်အစိုးရက ပြုလုပ်တဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသက အများစုဖြစ်တဲ့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက်သမားအဖြစ် မှားယွင်း စွပ်စွဲပြီး မတရားချုပ်နှောင်ကာ အမေရိကန်နိုင်ငံအနီး ဂွာတာနာမိုဘေး အကျဉ်းထောင်ကို ပို့ဆောင်ခဲ့မှုတွေကြောင့် အမေရိကန်နဲ့တကွ အနောက်နိုင်ငံတွေ အကြီးအကျယ် သိက္ခာကျခဲ့တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ပို့ဆောင်ခံရသူတွေထဲမှာ အပြစ်မဲ့သူတွေကို အကြမ်းဖက်သမား နာမည်တပ်ပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့ အခြေအနေတွေတောင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပဲ စီအိုင်အေရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံနဲ့ ထူထောင်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက် စစ်ကြောရေး စခန်းတွေမှာ “အဆင့်မြှင့် စစ်ကြောရေး” လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ ရေတစ်ပေါက်ခြင်း ကြာရှည်စွာ ခေါင်းပေါ်ကျစေပြီး နှိပ်စက်မှု အပါအဝင် နှိပ်စက်မှု အမျိုးမျိုး လုပ်တာလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း ပေါ်ထွက်လာရာမှာတော့ အခြေအနေက ပိုဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။
အခုလို စစ်ကြောရေး စခန်းတွေမှာ အကြမ်းဖက်သမားလို့ ယူဆခံထားရရုံ သက်သက်နဲ့ ထိန်းသိမ်းခံရပြီး လူလောကက ပျောက်ကွယ်သွားသူတွေလည်း ရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်း အနောက်နိုင်ငံတွေ အခုလို ပိုပြီး သိက္ခာကျခဲ့ရတာပါ။
အခုလို အကြမ်းဖက်သမား စစ်ကြောရေးလုပ်မှုတွေ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား လက်ထက်အတွင်းမှာ မရှိတော့ဘူး ဆိုပေမဲ့ သိက္ခာကျသွားတဲ့ အခြေအနေကတော့ ပြန်ပြင်လို့ မရခဲ့ပါဘူး။
၅။ အကြမ်းဖက် စစ်ဆင်ရေးမှာ ဘယ်လို တပ်ပြန်ဆုတ်မလဲ ဆိုတဲ့ အစီအမံ အရေးကြီးမှု
၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှု မဖြစ်ခင်ကာလတွေက အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံတကာ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ပိုမို ရှင်းလင်းတဲ့ အဆုံးသတ်မှုတွေ ရှိခဲ့တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဥပမာအားဖြင့် ဆီရီယာလီယွန် ပြည်တွင်းစစ် ကာလအတွင်း ၂၀ဝ၀ ပြည့်နှစ်မှာ ယူကေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဝင်ရောက်မှု၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားအရေး နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပါဝင်မှုနဲ့ ၁၉၉၁ ပင်လယ်ကွေ့ စစ်ပွဲတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံတကာ စစ်ဆင်ရေးတွေ ဖြစ်တဲ့ အာဖဂန်နဲ့ အီရတ်အရေးတွေမှာတော့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက် ကြာသွားခဲ့ပြီး ဒီအရေးတွေမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေဘက်က ဘယ်လို တပ်တွေ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာမလဲ ဆိုတဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ အစီအစဉ် ရှိမထားတာ ပေါ်လွင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀ဝ၁ ခုနှစ်မှာ အာဖဂန်က တာလီဘန်နဲ့ အယ်လ်ကိုင်းဒါးအဖွဲ့တွေကို မဖယ်ရှားဘူးဆိုရင် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အကြီးအကျယ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေ ဆက်ရှိနိုင်တာ မှန်ပေမယ့်လည်း အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံသစ် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးအပိုင်းကိုတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေ ပြီးမြောက်အောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့တာက တာလီဘန် ပြန်လည် အုပ်စိုးမှုနဲ့အတူ သက်သေဖြစ်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကနေ ဘာသင်ခန်းစာတွေ ယူနိုင်သလဲ